Armenia inopa kuendesa nendege pakati peRussia neGeorgia mushure mekunge Putin arambidza kufamba nendege
musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Airlines » Armenia inopa kuendesa nendege pakati peRussia neGeorgia mushure mekunge Putin arambidza kufamba nendege
Airlines • nhandare yendege • Armenia Kupwanya Nhau • Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose • Kuputsa Kufamba Nhau • Georgia Kuputsa Nhau • nhau • vanhu • Russia Kuputsa Nhau • ushanyi • kutakura • Kufamba Kwamugumo Kwidziridzo • Kufamba Wire Nhau • Trending Now
Mutungamiriri weArmenian akataura kuti nyika yakagadzirira kuita nzvimbo inodzivirira pakati peGeorgia neRussia kuti ipe zvinongedzo zvemhepo. Kusvika pano, kubva muna Chikunguru 8, ndege dzeArmenian dzinogona kuendesa ndege shanu kana kupfuura dzevanofamba nendege.
Ndege nhatu dzeArmenian dzakatoratidza kuda kwavo kupa kutaurirana kwemhepo pakati peRussia neGeorgia: Atlantis European, Taron Avia neArmenia. Sekureva kwaMutungamiri, huwandu hwendege hunogona kuwedzerwa kusvika kunomwe, kana zvichidikanwa zvakadaro.
Mutungamiri weRussia Vladimir Putin akarambidza nendege dzeRussia kuendesa vagari veRussia kuGeorgia kubva muna Chikunguru 8. Sarudzo iyi inouya mushure mekuratidzira kunopesana nehurumende neRussia muTbilisi. Ndege dzeGeorgia dzinorambidzwawo kubhururuka kuenda nekudzoka kuRussia.